What is PIVX?_XH_Yintoni i-PIVX? | PIVX
I-PIVX: UkuThengiswa okuPhezulu okuNgezelelweyo (X)
I-PIVX: Ukhuseleko lokuthengiselana kunye nolwazi oluyimfihlo olujoliswe kumthombo ovulekileyo wemithombo ye-cryptocurrency.
Umhla wokuqalisa: ngoFebruwari 1, 2016
(Ngaphantsi kwegama elithi Darknet (DNET))
I-POS: I-Pos 3.0 (i-Bitcoin engundoqo yekhowudi ye-0.10.x)
AmaMasternodes: I-Tor-Masternodes (10K PIVX / node)
IPIVX yinto eyenziwa ngokubanzi yoluntu kwimisebenzi ye-blockchain tech kunye ne-cryptocurrency. Oko sithetha ntoni ngolu hlobo: Zininzi iziqendu zento kwaye ngubani na i-PIVX kwaye kutheni i-PIVX ibonakalisiwe. Ukuqala ngeendlela ezisisiseko:
I-PIVX isisingqamaniso soTshintsho oluPhezulu, oluPhezulu lwangasese (X). Kulungile, ngoko ke igama.
I-PIVX yeyokhuseleko lokuthengiselana kunye nokugcinwa kwangasese kumthombo ovulekileyo wemithombo ye-cryptocurrency.
Kuthetha ukuba esiqwini sayayo, i-PIVX yenzelwe, ilungiswe, kwaye iguqulwa kunye neendlela ezifanelekileyo kunye nokuphuhlisa ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho lokuthengisa kunye nobumfihlo.
Ok, oko kuthetha ukuthini?
Kuthetha ukuba sikholelwa ukuba unelungelo lokutshintshela ngasese kunye ngokukhuselekileyo, ngaphandle kokuphazamiseka kwimiqathango yenkampani, iimpembelelo zikaburhulumenteni, amehlo aleqayo, kunye nabantu abathandekayo kunye nokunyakaza. Kuthetha ukuba sikholelwa kule minyaka yanamhlanje ixesha lokuvumela abantu ukuba batshintshanye kwaye basebenzise ubutyebi babo njani kwaye bafuna nini, ngoxolo lwengqondo ukuba ukuthengiselana kwabo kwenzeke ngendlela ekhawulezayo, nangendlela yangasese kunye nokuqinisekiswa.
Eqaliswe ngo-Feb 1, 2016 phantsi kwegama le-Darknet (iDNET), emva kokuphuhliswa kwenyusa nokubandakanyeka koluntu, kwagqitywa ukuba kuphinde ibuyele ngokutsha kwaye iguqule ngokusemthethweni igama kwi-PIVX ukuze ibonise ngokuchanekileyo imigaqo yeengingqi kunye neengcamango ezinzima. Kwi cryptocurrency.
Injongo ephambili ye-PIVX kukufikelela kufutshane nokuthengiselana kwangasese kunye nolawulo oluxhasa inethiwekhi ukwenzela ukuba bonke abasebenzisi abachaphazelekayo bancede. Nangona sisesimweni sethu ekufezekiseni oku, ezinye zezinto ziphantsi kophuhliso kwaye zifanele zivele kwixesha elizayo.